Ghostwriter Physics I Waxaan ka caawineynaa si khibrad leh qaybta waraaqaha fiisigiska
Qorayaashayagu waxay ku takhasuseen cilmiga fiisigiska
Fiisigiska wuxuu ku bilaabmaa culeys culus oo xisaab ah, waana sababta loogu tiriyo mid ka mid ah koorsooyinka ugu baahida badan. Xawaaruhuna waa dhakhso. Caddaynta iyo soo-saarista waxaa loola dhaqmayaa si kooban oo kooban, aqoon hore ayaa loo baahan yahay. Nidaamku wuxuu u socdaa sida dunta cas oo kale iyada oo loo marayo qaab dhismeedka koorsada oo wuxuu noqon karaa mid cabsi gelin iyo culeys badan, gaar ahaan bilowga. Waqtiga looga baahan yahay hawl keliya ayaa si dhakhso ah uga badnaan karta saacad ama fiid dhan.
Sababaha barnaamijka ciriiriga ah ayaa ah mid adag. Dhakhaatiirta jimicsiga jirka waxay jecelyihiin inay gaabin. Qaab dhismeedka saddex-geesoodka ah waa mid si fudud loo fududeeyay. Tirooyin fara badan ayaa loo soo koobay dhanka dhammaadka, kuwa yar yarna eber iyo dhammaan shuruudaha waa la tirtiray. Haddii aad ka maqantahay asalka xisaabta, waad ku guul darreysaneysaa inaad fahamto habka mararka qaarkood xag-jirka ah iyo inta badan aan nadiifka ahayn.
Intaas waxaa sii dheer, koorsada fiisigiska waxaad adeegsaneysaa qalab xisaabeed u xiran saynisyahano kale oo badan oo dabiici ah. Meelaha Hilbert, meelahaas oo leh cabbir aan dhammaad lahayn, ayaa loogu baahan yahay makaanikada makaanikada. Aragtida shaqada ee tirooyinka isku dhafan waxay siisaa aasaas muhiim u ah koronto-dhaliyaha.
Wadada loo maro labada dhisid iyada oo loo marayo maadooyinka shaqsiga ah iyo maadooyinka xisaabta waa mid dheer oo adag. Waqtiga tani badanaa waa gaaban yahay.
Barashada cilmiga fiisigiska ayaa ah mid kamid ah koorsooyinka ugu adag ee cilmiga dabiiciga ah wuxuuna isku daraa xirfado badan. Xisaabtu waa aaladda ganacsiga ee sayniska dabiiciga, sidoo kale sayniska kombuyuutarka. Caddeymo kala duwan oo ah walxaha, qurubyada, neerfaha ayaa la siiyaa aragti ahaan iyo ficil ahaanba muddada daraasadda. Fiisigiska fikradda ah, caddaynta ayaa la bixiyaa oo lagu daabacaa jilitaanka Monte Carlo. Fiisigiska la taaban karo sidoo kale waa maaddo aad u adag oo culus, taas oo sababtay in arday badani ay ka haraan waxbarashadooda. Waa inaadan sidaa dareemin. Ku foog mawduucyada ugu adag oo caawimaad ha hel. Waxaan kaa caawineynaa waqtigaaga waraaqda, qoraalka iyo qoraalka ee wakaaladdayada qorista. Nala soo xiriir ama codso dib u soo wicitaan bilaash ah. Waxaan si toos ah u qaadaneynaa dalabkaaga tacliimeed waxaanan kaa raadinaynaa qormade-yaqaanka kuugu habboon ee nooga imanaya barkaddeenna qorayaasha. Adiga ayaa lagusoo dhaweynayaa inaad naga dalbato warqadaada cilmiga ah hada!
Maadooyinka soo socda ayaa badanaa loo yaqaan maadooyinka ugu adag ardayda, oo dabcan ku kala duwanaan kara jaamacad ilaa jaamacad:
Xiddigiska iyo xiddigiska
Waan ku faraxsanaan lahayn inaan kaa caawinno inaad diirada saarto maadooyinka la soo sheegay. Waxaan kaa caawinaynaa bachelor-kaaga ama shahaadada mastarka ama shahaadada diblooma ama shahaadada dhakhtarka. Waa muhiim inaad noo sheegto shuruudahaaga shaqsiyeed.
Fiisigisyahankeenu wuxuu markaa u adeegsan karaa inuu abuuro warqad cilmiyeysan oo kugu habboon. Badanaa qoraagayagu wuxuu dooran doonaa qaab dhismeedka soo socda, kaas oo ku kala duwanaan kara iyadoo kuxiran shuruudahaaga, maadadaada iyo howshaada:
Liiska soo gaabinta
Dhibaatada / ujeedada shaqada
Qayb wax ku ool ah
Soo koobid / gabagabo / gabagabo
Qoraalka cirfiidka ee cilmiga fiisigiska
Waxa kale oo aad la xidhiidhi doontaa fiisikiska tijaabada ah sida arday saadaasha hawada, macallin arday ama ilmo yar. Waqtigan xaadirka ah marka xawaaraha gaariga uu isu badalo laba jeer oo laga dhasho dhibic ku jirta booska, dhibaatooyinka ugu horeeya ee isfahamka badanaa way soo baxaan. Ama dardargelinta culeyska, taas oo dhab ahaantii ah dariiqa lagama maarmaanka ah. Qalabka xisaabta iyo tareennada fikirka ee ka dambeeya xisaabinta fiisikiska waxay u baahan yihiin tixgelin xoog leh. Waqtiga loo baahan yahay oo keliya ayaa si taxaddar leh loogu sifeyn karaa mid aad u weyn. Noo kaalay oo shaqadaada naga dalbo. Tayada ayaad la yaabi doontaa. Waxaan bixinaa tayo hufan, la kulan waqtigeena ugu dambeeya dabcan waxaad sidoo kale heli doontaa qashin Waxaad markaa arki kartaa in shaqadu ay tahay mid ka kooban waxyaabo gaar ah. Waxaan horeyba uga caawinay aqoonyahano badan oo cilmiga fiisigiska si qarsoodi ah qoraaladooda cilmiga ah Adeegsiga adeegyadeena waxay kuu badbaadin doontaa waqti badan iyo neerfayaal. Waxaad heli doontaa buundo aad u wanaagsan haddaad noo ogolaato inaan qorno shaqadaada. Shaqada tacliimeed, waa inaad u isticmaashaa wakaaladeena cirfiidka qoraaga. Shaqada gurigaaga haloo qoro. Qoraa aqoonyahan ah oo ka socda barkaddeena qorayaasha oo shahaadada aad ugu wanaagsan fiisigiska ayaa hubin doonta tayada shaqadaada. Daraasad cilmiyeed, waa inaad doorataa hay'addayada qormooyinka qora. Qorayaashayagu waxay ku qoraan shaqadaada si taxaddar leh iyo waqtiga.
Fiisigiska cilmiga xiddigiska
Astrophysics-ka ayaa si yar u yar oo ku saabsan booska. Meerayaasha, xiddigaha, masaafada, iyo da'da dhammaantood waa la wada eegi karaa. Aragtida ku saabsan habdhaqanka waqtiga waxaa laga soo qaadan karaa aragtida godadka madow. Tirakoobku wuxuu door muhiim ah u leeyahay sidii fahamka makaanikada makaanikada si loogu duubo tiro aan dhammaad lahayn oo ah atomyo ama subatomic Qurub qaab aan xad lahayn oo cufan. Tixgalinta noocan oo kale ah ayaa wax ku biirisay oo sii wadaysa inay aragti cusub ka bixiso qaab dhismeedka maaddada. Awood kale oo qarsoodi ah waa in lagu sharaxo habkan: cuf isjiidadka.
Qoraal-gacmeedku wuxuu ka caawiyaa ardayda sayniska shaqada tacliimeed sida kuwa Bachelor. Ardayda, shahaadada bachelor-ka waxay ka mid tahay shahaadada koowaad ee tacliinta. Shahaadada Bachelor-ka, sidoo kale, waxaad qaadan kartaa takhasus ku saabsan cilmiga xiddigiska. Fiisigisyahano badan ayaa raba inay fahmaan adduunka. Dabcan, tan sidoo kale waxaa ku jira booska.
Fiisigis ku takhasusay cilmiga fiisigiska
Tijaabooyinka, laga bilaabo kuleylka calorimeter-ka ilaa duubista sawirka raajada ee raajada, waa qasab koorsooyinka jaamacadaha kala duwan Duubista xogta cabbirka iyo u adeegsiga si loo xisaabiyo joogtada dabiiciga ee la yaqaan waa jimicsi fudud. Laakiin xisaabinta khaladaadka, celceliska miisaanka iyo cabirka logarithmic, tixgelinta xisaabta ayaa soo galaysa, taas oo ay tahay in la tixgeliyo.
Barxadayada qorayaasha waxay leeyihiin dhowr ghostwriters oo ku takhasusay fiisigiska wax ku oolka ah oo kuu kaydsan adiga oo doonaya inaad ka shaqeyso shaqadooda. Waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan ah waxayna ku siin karaan shaqo ku saabsan hawlahaaga oo aad u baahan lahayd dhowr toddobaad oo aanad xal u helin. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad si guul leh u dhammaystirto barashadaada sayniska. Ka faa'iideyso kaalmadan hadda oo naga dalbo shaqada gurigaaga, shahaadada bachelor, shahaadada Masterka, Qoraal oder sii daayo. Waan ku siin doonaa helfen.
Fiisigis fiisigiska teori
Xisaab horumarsan, oo badanaa loo yaqaan fiisigis teori. Isku xidhka waxyaabaha ka soo baxa cilmiga fiisigiska tijaabada ah iyo xisaabta sare waa hal shay. Isleegga Lagrange ee nooca koowaad iyo kan labaad ayaa markaa si wanaagsan loo xisaabin karaa, xitaa haddii gargaar aanu waligiis halkan ku khaldami karin. Magacyada lagu darto usbuucba usbuuc ka dib oo leh xarfaha Griigga, astaamaha xisaabeed iyo soo gaabin - ugu yaraan Einstein wuxuu soo bandhigay qaar badan oo iyaga ka mid ah - waxay keenaan caqabad.
Qaab dhismeedka thermodynamics iyo makaanikada gaar ahaan, wey ku badan yihiin. Isla mar ahaantaana, waxay muhiim u yihiin si loogu soo bandhigo cilaaqaadka si cad iyo xitaa fududeynta xisaabinta. Xalalka sharraxaadda iyadoo la adeegsanayo tusaalooyin caan ah asal ahaan lama beddeli karo fahamka. Haddii aad dhammaystirto koorsada ama weyn ee fiisigiska afkaarta ah ee semestarrada la qorsheeyey ee muddada daraasadda, dhammaan albaabadu way kuu furan yihiin. Waad sii wadi kartaa baaritaanka maadadaada ama waxaad u shaqeyn kartaa lataliye ahaan. Waad xallin kartaa dhibaatooyinka fudud ee dhaqaalaha ama, tusaale ahaan, waxaad iskaa u heshay shirkad la-talin.
Hubinta tayada ee cilmiga fiisigiska